Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! काँग्रेस उम्मेदवारले पैसा बाँडेकाे पाएपछि पञ्चकन्यामा विवाद, मतदान राेकियाे
काँग्रेस उम्मेदवारले पैसा बाँडेकाे पाएपछि पञ्चकन्यामा विवाद, मतदान राेकियाे
नुवाकोट । नुवाकाेटकाे पन्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. ५ भद्रुटारको बच्छला मावि मतदान स्थलमा विवाद भएपछि मतदान अवरूद्ध भएकाे छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यका उमेदवार रामजङ्ग बुढाथोकीले मतदातालाइ ५०० रूपैंयाका दरले बाँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेपछि विवाद भएकाे हाे । अन्य दलका उम्मेदवारहरूले बुढाथाेकीकाे उम्मेदवारी खारेज नभएसम्म मतदान हुन नदिने भन्दै विराेध गरिरहेका छन् । दुवै पक्षका कार्यकर्ताबीच केहीबेर सामान्य झडप समेत भएकाे थियाे ।
बिहान १० बजेदेखि मतदान अवरूद्ध भएकाे हाे । अहिले दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेकाे छ । मतदान पुनः सुचारू हुनेबारेकाे विवादले मतदाता अलमलमा परेका छन् । राेकिएकाे मतदान सुरू हुने समयमकाे टुंगाे नहुँदा कतिबेर बस्नु पर्ने भन्ने अन्याैल भइरहेकाे लाइनमा बसिरहनुभएकी स्थानीय चिनिमाया तामाडले बताउनुभयाे ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३०, २०७९, १०:५९:००